कहिलेसम्म अनशन ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७० माघ २८, मंगलवार ०२:५१ गते
पछिल्लो समय नेपालमा अनशन बस्नेहरु आफूले राखेका माग पूरा हुनेमा आशावादी हुन छाडेजस्तो छ । त्रिविमा डाक्टर केसी एकपछि अर्को अनशनमा बस्नु परेको छ । भ्रष्टाचार निवारणका लागि गरेको अनशनबाट सरकार गल्ने छेकछन्द नपाएपछि शारदा भूषालले सरकारको किरिया गरेर अनशन तोडिन् । माओवादीले मारेको छोराको हत्याराको पहिचान र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राखेर कात्तिक ७ गतेदेखि अनशनमा बसेका गोरखाका वृद्ध दम्पती नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीहरुको अनशन कहिले टुङ्गिने हो ? भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
गोरखाका दम्पतीले छोराको हत्याराको कारबाहीको माग राख्दा माओवादी आक्रोशित भएको छ । एकथरी मानवअधिकारवादीहरु जे भए पनि दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्छन्, अर्काथरी सशस्त्र युद्धकालमा भएको घटना भएकाले माओवादीसँग शान्ति सम्झौता हुँदा भएको सहमतिअनुसार यस्ता घटनालाई सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर सम्बोधन हुनुपर्छ भन्छन् । विसं २०६३ साल मंसिर पाँचमा शान्ति सम्झौता हुँदा छ महिनाभित्र बनाउने भनेको आयोग कहिले बन्ने हो, यसको पनि टुङ्गो छैन । आफ्ना मागमा अडिग अधिकारी दम्पतीको अनशन कसरी तोडिने हो ? या उनीहरुको जीवन नै समाप्त हुने हो ? चासो र चिन्ता यही छ ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षका बेला छोरा गुमाएका वृद्ध दम्पती नन्दप्रसाद र गंगामाया अधिकारीले हत्याराको पहिचान र कारबाहीको माग राखेर लगातार अनशनमा बसेको माघ १८ गते सय दिन पुग्यो । हत्यामा संलग्न भएका भनेर किटानी जाहेरी परेका व्यक्तिहरु समातिने र प्रमाणको अभावमा छुट्ने क्रम चलेका बेला अनशन कहिले रोकिएला, अनिश्चित छ ।
अनशनकै बलमा सुरू भएको अनुसन्धानपछि प्रहरीले आरोपित ११ मध्येका दुई जनालाई नसमाएको होइन । तर, अनुसन्धान गरेर जुटाइएका प्रमाणहरुले आरोपितका विरूद्ध मुद्दा चल्न नसक्ने भएपछि उनीहरु छुटे । नसमाइएका अन्य पनि समाइए भने उनीहरुका विरूद्ध मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना छैन । अघिल्ला दुईजस्तै अरु जो समातिए पनि छुट्ने नै हुन् ।
यसबीचमा चितवन प्रहरीले अनुसन्धानबाट खुलेको अर्को फरक पाटो पनि सार्वजनिक गरेको छ । अधिकारी दम्पतीका छोरा कृष्णलाई गोली हान्ने तीन जना रहेको चितवनका प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीले नै सार्वजनिक गरेका हुन् । तीनमध्ये दुईको नामसमेत खुलेको कार्कीले बताएका थिए । कार्कीकै अनुसार उनीहरु किटानी जाहेरीमा नाम परेका ११ जनाभन्दा बाहिरका हुन् । कार्कीले यसो भनेको पनि माघ २३ गते एक महिना पुग्यो ।
गोली हान्ने व्यक्तिहरु किटानी जाहेरीमा नाम परेका भन्दा बाहिरका हुन् भनेर प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले किटानी जाहेरीमा नाम उल्लेख भएकाहरु दोषी हुन नसक्ने संकेत गरेका छन् । तर, पहिचान भएकाहरुलाई समाउँछौँ, समाउँछौंँ भन्दै हिँडेको प्रहरी कता पुगेको हो, थाहा छैन । उनीहरु पक्राउ परेका छैनन् । उनीहरु समातिए यो प्रकरण र अनशन फरक मोडमा जाने सम्भावना देखिएको छ ।
‘पहिचान भयो भनिएका गोली हान्नेहरु समाउन जरूरी भएको छ’, कृष्ण अधिकारीको हत्या हुने बेलादेखि नै यो घटना नियालिरहेका मानवअधिकारकर्मी मुकुन्द दाहाल भन्छन्, ‘प्रहरीले उनीहरुलाई समाएर प्रमाण जुटाउन सक्यो भने अहिलेको परिवेश सहज बनेर जाने थियो ।’
‘गोली हान्ने व्यक्ति मैले किटानी जाहेरीमा नाम उल्लेख गरेका भन्दा बाहिरका हुन सक्छन् । गोली कसले हानेको हो, मलाई जानकारी हुने विषय होइन । तर, मैले नाम दिएका ११ जनाले भाइको हत्या गर्ने योजना बनाएको भने साँचो हो’, उजुरीकर्ता मृतक कृष्णका दाजु नुरप्रसाद अधिकारीले भने । उनीहरुले ‘बाहिरका सुटर’ प्रयोग गरेको नुरप्रसाद बताउँछन् ।
प्रहरी उपरीक्षक कार्की गोली हान्नेहरुको थप परिचय सार्वजनिक गर्र्न चाहँदैनन् । ‘यो बारेमा अनुसन्धान चलिरहेको छ । मान्छे समातिन अझै केही समय लाग्छ’, प्रहरी उपरीक्षक कार्कीले भने । चाँडोभन्दा चाँडो उनीहरु समातिए घटनाले फरक मोड लिनेमा प्रहरी पनि आशावादी छ । तर, समाउन अप्ठेरो परेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
घटनाका वास्तविक दोषी र किटानीमा नाम मुछिएका व्यक्तिको भूमिकाका बारेमा सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउने दायित्व प्रहरीको हो भन्छन् दाहाल । यसो भएमा सबै पक्षले न्याय पाउने र दोषी कारबाहीमा पर्ने हुन्छ । कृष्ण हत्याको जिम्मेवारी माओवादीले नै लिएको थियो । एकीकृत नेकपा (माओवादी) र नेकपा–माओवादी अनुसन्धान सुरू भएकोमा रूष्ट बनेका छन् ।
विसं २०६१ सालको जेठ २४ मा गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारीको चितवन रत्ननगर बकुल्लहर चोकमा हत्या भएको थियो । हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा चितवन प्रहरीमा ११ जनाका विरूद्ध नामै किटेर जाहेरी दर्ता भएको छ । जाहेरी दर्ता भएको लामो समयसम्म अनुसन्धान सुरू नभएपछि मृतकका बुबा नन्दप्रसाद र आमा गंगामायाले काठमाडौँमा अनशन सुरू गर्छन् ।
अधिकारी दम्पतीको अनशनपछि मानवअधिकार आयोगले घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिन्छ । सोही निर्देशनपछि गएको साउनको अन्तिम साताबाट बन्द रहेको उजुरी फाइल खुल्छ । फाइल खुलेपछि आरोपित ११ जनामध्ये छुट्टाछुट्टै मितिमा दुई जना पक्राउ पर्छन् । उनीहरुका विरूद्ध अनुसन्धान गरे पनि मुद्दा चलाउने प्रमाण पुग्दैन । दुवै हाजिरी जमानीमा छुट्छन् ।
अधिकारी दम्पतीको अनशन सुरू भएको ४६औँ दिनमा पहिलो पटक घटनाका आरोपी ११ जनामध्येका रामप्रसाद अधिकारी समातिएका थिए । भदौ २१ मा उनी समातिएपछि अधिकारी दम्पतीले भदौ २२ को मध्यरातमा ४७ दिनदेखि जारी अनशन टुङ्ग्याएका थिए ।
अनुसन्धान पूरा भएपछि सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुग्ने भन्दै रामप्रसादलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न निर्देशन दिए । रामप्रसाद असोज १४ मा छुटे । रामप्रसाद छुटेपछि अधिकारी दम्पतीले कात्तिक सात गतेबाट फेरि अनशन सुरू गरेका हुन् ।
दोस्रो पटक अनशन सुरू गरेको शनिबार सय दिन पुगेको छ । अधिकारी दम्पतीको अनशनप्रति खासै चासो नराखिएको चितवनमा शनिबार भने उनीहरुको जीवन रक्षाको माग गर्दै मैनबत्ती बालियो । माओवादीले कृष्ण अधिकारीको हत्या गरेको स्थलमै मैन बालेर प्रदर्शन गरिएको थियो, जसको नेतृत्व कृष्णका कान्छा काका ठाकुर अधिकारीले गरेका थिए ।
कृष्णका बाबुहरु तीन भाइ हुन् । जेठा नन्दप्रसाद र कान्छा ठाकुर हुन् भने माइला बुबाको निधन भइसकेको छ । कृष्णका हत्या आरोपीमा माइली काकीको नाम पनि छ । फुपूलाई पनि आरोपित बनाएका छन् । अरु दाजुभाइहरु हुन् । आरोपित ११ जनामध्ये दुई जनामात्रै नाताभन्दा बाहिरका छन् ।
माइला काकाको निधनपछि अंशमा माइली आमासँग विवाद रहेको नुरप्रसादको भनाइ छ । सोही कारण माइली आमाले माओवादीको सहयोगमा भाइको ज्यान लिएको नुरप्रसादको आरोप छ । अधिकारी परिवारमा अंश विवाद रहेको स्थानीय पनि स्वीकार गर्छन् । माइली आमाको पक्ष लिनेलाई भाइ मारेको भन्दै फसाएको आरोपितहरुको भनाइ रहेको छ ।
अनुसन्धान प्रकृया सुरू भएपछि कृष्ण अधिकारी हत्या प्रकरणमा अरुलाई नभई आफूहरुलाई समाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईले चुनौतीसमेत दिएका थिए । तर, आरोपीमा नातागोता परेका छन् । उनीहरु सक्रिय राजनीतिमा लागेका माओवादीका कार्यकर्तासमेत नभएको पाइएको छ ।
नन्दप्रसाद र गंगामायाले दोस्रो पटक अनशन सुरू गरेपछि मंसिर २१ मा ११ मध्येका अर्का आरोपी परशुराम पौडेल पक्राउ परेका थिए । तर, अघिल्लो पटकजस्तो अधिकारी दम्पतीले यो पटक अनशन टुङ्ग्याएनन् । पक्राउ परेका पौडेल पनि रामप्रसाद अधिकारीजस्तै २५ दिन हिरासतमा बसेर मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको भन्दै हाजिरी जमानीमा छुटे ।
हत्यालगत्तै जेठ २६ मा दोषी पहिचान गरी कारबाही गरिपाऊँ भनेर कृष्णका बुबा नन्दप्रसादले चितवन प्रहरीमा उजुरी दिए । त्यस्तै, विसं २०६२ सालको मंसिर २६ मा नुरप्रसाद अधिकारीले आफ्नो भाइको हत्यामा संलग्न हुनेहरु ११ जनाको नाम नै किटान गरेर चितवन प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए ।
रामप्रसादको बारेमा गरेको अनुसन्धानमा सो घटनामा गोली चलाउने को थियो भनेर पहिचान गर्न नसकेको भनेर सरकारी वकिलले टिप्पणी गरेका थिए । गोली चलाउनेको पहिचान गर्न लागेको प्रहरीले त्यो काममा संलग्नहरु भने किटानी जाहेरीमा नाम परेका भन्दा बाहिरका व्यक्तिहरु रहेको भनेर सार्वजनिक गरेको छ ।
घटनाको अनुसन्धान सुरू गर्न अधिकारी दम्पतीको अनशनले जे जसरी दबाब दियो, अनुसन्धान प्रकृया सुरू भएपछि माओवादीले देखाएको आक्रोशले पनि दोषी पहिचान र पक्राउ नगर्न पनि भूमिका खेल्यो कि भन्ने आशंका नगरिएको होइन । तर, प्रहरीको अनुसन्धानलाई कसैको भूमिकाले कुनै प्रभाव नपारेको प्रहरी उपरीक्षक कार्कीको भनाइ छ ।